Imandarmedia.com.np: बार्सिलोनाका अध्यक्षले किन गरे नेइमारको आलोचना ?
Sports, Sports News » बार्सिलोनाका अध्यक्षले किन गरे नेइमारको आलोचना ?
बार्सिलोनाका अध्यक्षले किन गरे नेइमारको आलोचना ?
बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमुले नेइमारको आलोचना गरेका छन् ।
बार्टोमुले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) जाने क्रममा देखाएको व्यवहारप्रति नेइमारको आलोचना गरेका हुन् । नेइमारले बार्सिलोना छोड्ने तयारी हुँदाहुँदै पनि सन् २०१६ मा क्लबसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुन सक्ने अध्यक्ष बार्टोमुको भनाई छ ।